Banaanbax aad u ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Banaanbax aad u ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa maanta fagaaraha taaladda Daljirka Daahsoon illaa isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbax aad u ballaaran oo ay isugu soo baxeen boqolaal qof oo u badnaa dhalinyaro ku shaqeeysata gaadiidka mootada loo yaqaano Bajaajta.
Banaanbaxaasi oo ay soo qaban qaabiyeen darawalada gaadiidka mootada bajaajta ayaa markii hore ka bilawday taalada Daljirka Daahsoon, wuxuuna markii dambe kusoo fiday illaa isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Dadkaasi banaabaxa dhigaayay ayaa ka cabanayay in loo diiday isticmaalka waddooyinka muhiimka ah ee ku yaalla magaalada Muqdisho, iyagoona sheegay inay yihiin dhalinyaro dhawaan dalka dib ugu soo laabtay islamarkaana doonaya inay nolol maalmeedkooda soo saartaan.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda Saalax Sheekh Maxamed ayaa dadkaasi banaabaxayay u sheegay inay si aad uga xun yihiin wixii dhacay islamarkaana ay xarunta gobolka Banaadir u wadi doonaan guddi ka kooban 5 qof oo darawalada bajaajleyda ah, kadibne arrintooda wadahadal ku dhameyn doonaan.
Waxaa inta badan magaalada Muqdisho si weyn looga isticmaalaa mootooyinka bajaajka, waxaana ku nafciya oo ku shaqeeysta dhalinyaro badan oo dib ugu soo laabtay dalka, kuwaas oo kasoo saarta nolol maalmeedkooda iyo kuwa qoysaskooda.